'डन पार्टी' एमालेको महाधिवेशन स्थलमै फोडफाड
Posted by abc staff.4years,3months ago
काठमाडौं । मुलुकको सवैभन्दा बढी गुण्डा र डनहरु भएको पार्टी नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनको उद्घाटन पूर्व नै सहभागी हुन आएका कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका छन् । महाधिवेशनमा आएका कार्यकर्ताले कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश नपाएको आक्रोसमा मुख्य स्वागत गेट नै तोडफोड गरि जलाएका छन् । उनीहरुले गेटमा सजाइएका ब्यानर, तुल र फेलेक्स बोर्ड समेत जलाईदिएका छन् । पद्मोदय मोडदेखि पर्यटन बोर्डसम्मको सडकमा सवारीसाधन अवरुद्ध भएको थियो भने कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्न ब्यस्त थिए ।बाहिरको परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको थियो ।
अन्तिम वार खेल्ने डन चक्रेको ईच्छा
काठमाडौं । लागूऔषध मुद्दामा सजाय भुक्तान गरि जेलबाट बाहिरिन लागेका डन मिलन गुरुङ उर्फ चक्रे मिलन जेलबाट नै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको धरौंटी रकम मिलाउन लागीपरेका छन् । लागूऔषध मुद्दामा आगामी साउन २० गते अदालतबाट तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरि चक्रे बाहिर आउन लागेका हुन् । अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा बिशेष अदालतले चर्केसँग एक करोड ९० लाख धरौंटी माग गरेको थियो । उक्त रकम बराबर चक्रेले अदालतमा धरौंटी जम्मा नगरे उनी फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा जानु पर्ने हुन्छ । धरौंटी बराबरको जग्गा राख्न डन चक्रेका सहयोगी यतिखेर जग्गा खोज्दै हिडेका छन् ।
अध्यक्ष बन्नलाई बल्खु दरबारमा भयानक रडाको
काठमाडौं । नवौं महाधिवेशन आउन केही दिन बाँकी नहुँदै एमालेभित्र नयाँ नेतृत्वमा उभिएका नेताद्धय माधवकुमार नेपाल र केपी ओली सशंकित हुन थालेका छन् । एक समुहले अर्को समुहको सकेसम्मको आलोचना गर्न लागेका दुवै समुहको महाधिवेशनका वितण्डा छताछुल्ल भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल होस् वा गुटगत चोकहरु हुन्, सवैतिर एकले अर्काको राजनीतिक जीवन र चरित्र समाप्तै हुने खालका प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । प्रतिनिधि छनौट भइसकेपछि उनीहरुले आफू पक्षधरका प्रतिनिधिहरुको लगत बुझिरहेका छन् । तर दुवै पक्ष जीत हुनेमा सशंकित छन् । अध्यक्ष झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरुलाई साथ लिएर मैदानमा उत्रिएका नेपाल र वामदेव गौमतको भरमा उही मैदानमा अध्यक्ष बन्ने उत्सुकता बोकेका ओलीका लागि कम समस्या छैन । प्रतिनिधिहरु राजधानी छिर्ने क्रम सुरु भएपछि दुई प्यानलमा विभाजित भएका नेताहरुका कार्यक्रम, सम्बोधन र वैठकमै भ्याईनभ्याई भएको छ ।
यस्तो छ खुफिया एजेन्सी ‘रअ’को खेल नेपाल प्रहरीमा
काठमाडौं । भारतीय गुप्तचरी संस्था ‘रअ’ले आफ्नो नाजायज क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सवैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीलाई प्रयोग गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । आफ्नो अवैध गतिविधि सञ्चालन गर्न र नेपाल सरकारको सूचना चुहाउन प्रहरीको बढुवा–सरुवामा समेत उसले आफूले इच्छाएको ब्यक्ति बनाउने गरेको छ । स्रोत भन्छ,‘हालै भएको डीआईजी बढुवा सिफारिसमा समेत सात मध्ये दुई जना ‘रअ’ले चाहेको ब्यक्ति परेका छन् ।’ पछिल्लो समयमा ‘रअ’ सँग सवैभन्दा बढी निकट रहनेमा डीआईजी विज्ञानराज शर्मा र सुरेन्द्रबहादुर शाह रहेका छन् । एकताका डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई समेत ‘रअ’ले परिचालन गर्ने गरेको सञ्चारमाध्यामबाट नै सार्वजनिक भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार ‘रअ’ ले सार्वजनिक पहिचान र विवादमा पर्ने वित्तिकै आफ्नो लागि काम गर्ने नयाँ एजेन्ट खोज्न थाल्छ ।
तेक्वान्दो संघमा दिपराजको भूत
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सवैभन्दा बढी मेडल ल्याउन सफल तेक्वान्दो खेल सिमित ब्यक्तिको स्वार्थका कारण यतिबेला विलाउने अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रको गौरव राख्न सफल तेक्वान्दो खेलमा भ्रष्टाचारी र स्वार्थीहरुको गिरोह हावी भएपछि यस्तो अवस्था भएको हो । कुनै बेला ओलम्पिक खेलमा समेत पदक ल्याउन सफल भएको तेक्वान्दो खेलले अहिले दक्षिण एशियाभित्र हुने खेलमा समेत पदक ल्याउन छाडेको छ ।
दुई दशकदेखि तेक्वान्दो खेल र नेपाल तेक्वान्दो संघमा एकछत्र राज गर्दै आएका भ्रष्ट महासचिव दिपराज गुरुङका कारण तेक्वान्दो खेलप्रति मरिमेट्ने खेलाडीहरु पलायन हुन थालेका छन् । स्रोत भन्छ,‘गुरुङले तेक्वान्दो खेललाई आफ्नै घरबाट ब्यक्तिगत र दलगत स्थार्थका लागि हाँक्ने गरेका कारण तेक्वान्दो खेलाडी उनको गलत निर्णय मान्न र समर्थन बाध्य छन् । उनको ब्यक्तिगत निर्णयलाई टुलुटुलु हेर्नु सिवाय खेलाडीले केही गर्न सकेका छैनन् ।’
सूची संसोधनले प्रहरीमा दु:खी भन्दा खुसि हुने बढी
रोशन पाण्डे / काठमाडौं । व्रिफकेशको आधारमा सिफारिस भएको बढुवा अन्तत: संसोधन हुने भएपछि नेपाल प्रहरीको मातहतमा खुसियाली छाएको छ । नेपाल प्रहरीमा काम गर्नेलाई भन्दा नातावाद, कृपावाद, चाकडी र व्रिफकेश लेनदेनको आधारमा बढुवा सिफारिस हुन थालेपछि प्रहरीभित्र ठूलो असन्तोष बढेको थियो । लोक सेवा आयोगको छानविन समितिले बढुवा सिफारिसलाई संसोधान गरेपछि उक्त अन्योल तत्कालका लागि हटेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वास्थ्य उपचारको क्रममा अमेरिकामा रहेकाले उप तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई कार्यावहाक प्रधानमन्त्री दिन काँग्रेसले सहमति जनाएको छ । स्रोतका अनुसार हप्तौंसम्म रोकिएको कामकाजको गाँठो फुकाउन र सरकारको महत्वपूर्ण काम सुचारु गर्न मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्दैछ ।
बलात्कार गरेपछि ५ लाख रुपैयाँको प्रस्ताब...
काठमाडौं । आफ्नै रेष्टुरेन्टमा कार्यरत युवतीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा जेल चलान भएका अभियुक्तले पीडीतलाई मुद्दा फिर्ता दबाब दिएका कारण पीडितले बयान नै परिवर्तन गरेको रहस्य खुलुको छ । मुद्दा पुर्पक्षका लागि जेल भएका चाबहिलस्थित ‘यू क्यान सी’ डान्स रेष्टुरेन्टका सञ्चालक नबिन भन्ने बीरबहादुर बुढाथोकीले पीडीत युवतीलाई धम्क्याउने गरेको पीडितका परिवारले बताएका थिए । मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका बुढाथोकीले बयान परिवर्तन गरेपछि पीडितलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव पठाएका थिए । बुढाथोकीले आफ्नो गिरोह लगाएर मुद्दा फिर्ता गर्न पीडीत नुवाकोटकी रिता राई (परिवर्तित नामर्) र उनका परिवालाई धम्की दिइरहेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएपछि अभियुक्त बुढाथोकी दुई महिनादेखि सरदखोर डिल्लीबजारमा छन् ।
बाबुराम तर्साउन प्रचण्ड वैद्य ‘बा’ को शरणमा
काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र नयाँ शक्ति बनाउने र समानान्तर समिति तथा विभागहरुको गठन तयारी नेता डा. बाबुराम भट्टराइले गरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो साख जोगाउन फरक रणनीति अपनाएका छन् । नयाँ शक्तिका रुपमा विभाजित माओवादीहरुसँग बाबुरामको एकताको हल्ला सुनेपछि प्रचण्ड आफैं एकताको प्रयासमा जुटका छन् । यसअघि प्रचण्डले भारतीयहरुसँग भेटेर बाबुरामलाई सम्झाउनका लागि गुहार मागेका थिए । अहिले पाँच माओवादीहरुको कार्यगत एकताका लागि मुद्दा तय गर्न कार्यदल गठन भएको छ । ‘यो कार्यगत एकताका लागि सुरु भएको अभियान हो । यसको मुख्य योजना भनेको बाबुरामले बनाउन लागेको नयाँशक्ति र एकीकरण प्रयत्नलाई प्रचण्डले विगार्नु हो ।’, स्रोतले भन्यो ।
कानूनको दुरुपयोग गर्दै नागरिकलाई थुन्दै एसपी अमात्य
सप्तरी । पत्रकार दिपेन्द्र झाले सामाजिक सञ्जाल फुसबुकमा ‘सप्तरीमा सुध्रँदो सुरक्षा’ शीर्षकमा लेखेको समाचार राखे । सामान्य ब्यापार–ब्यवसाय गर्ने सप्तरीका अब्दुल रहमानले उक्त समाचारको कमेन्ट लेखे, ‘के को सुध्रिनु आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो पनि ५०,०००।’ उक्त कमेन्टका लेखेकै कारण कानूनको अपब्याख्या गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख एसपी दिनेश अमात्यले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत उनलाई मुद्दा चलाए । यतिखेर सोही विषय ‘हट न्यूज’ बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सुरु भएको उक्त प्रकरणले ठूलै रुप लियो । कानूनको अपब्याख्या गर्दै कानूनका रक्षकले नै आफ्नो विरोधी सिध्याउन कानूनको दुरुपयोग कसरी गर्छन भन्ने कुरा उक्त प्रकरणपछि उदाङ्गो भएको छ । रहमानलाई एसपी अमात्यले अनुसन्धानको नाममा अदालतबाट म्याद थप गरि १७ दिनसम्म अवैध थुनामा राखेपछि मात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेका थिए ।
५ बर्षे जेल यात्रा सकेर चक्रे छुट्दै
काठमाडौं । राजधानीमा शक्तिशाली गुण्डाहरुका नाईकेको रुपमा चिनिएका मिलन गुरुङ उर्फ चक्र्रे अगाडि परे ‘मैं हुुँ’ भन्ने अर्का गुण्डाका नाईके राजीब गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्गे कै निद हराम हुने गर्छ । तर, यहाँ उठाउन लागेको प्रसङ्ग भने अकै छ । लुटेरा हुँदै ट्याक्सी चालकबाट करोडपति बनेका काभ्रेका बिरेन्द्रलाल श्रेष्ठले नै लागूऔषध हाल्न लगाएर चक्रे मिलनलाई फसाएको रहस्य उजागर भएको छ । चक्रेलाई फसाएर आफू राजधानीको शक्तिशाली दलाल भएको पुष्टि गर्न उनले तत्कालिन डीएसपी जगतमान श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेका थिए । कारण थियो, ५ वर्ष अघि चक्रे मिलन र उनका भाई तेजेन्द्र गुरुङसँग लिएको ५० लाख रुपैंयाँ श्रेष्ठले समयमा फिर्ता गर्न नसक्नु । स्रोतका अनुसार तत्कालिन समयमा चक्रे मिलनले लिएको रकम तत्काल फिर्ता गर्न दलाल श्रेष्ठलाई अल्टिमेटम् दिएका थिए । तोकिएको मितिमा फैसा फिर्ता नगरे ज्यानैलिनेसम्मको धम्की गुण्डाका नाईके चक्रेले दिएपछि उनलाई फसाउने षड्यन्त्र सुरु भएको थियो ।
तेरिया बनिन् डान्स इन्डिया डान्सको स्टार
काठमाडौं । नेपाली १२ वर्षिया बालिका तेरिया फैजामगरले भारतीय च्यानल जीटीभीमा प्रसारण भएको डान्स इन्डिया डान्स (डीआईडी) लिटिल मास्टर्स सिजन ३ को उपाधि चुम्न सफल भएकी छिन् । शनिबार राती भएको भएको अन्तिम फाइनलमा १२ बर्षिया नेपाली बालिका तेरियाले तीन जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उपाधी हासिल गरेकी हुन् । उपाधीस“गै तेरियाले भारतीय रुपैया“ ५० लाख रुपैया“ र एउटा शानदार कारसमेत पाएकी छिन् । नेपालीभूमिबाट यति ठूलो धनराशीको पुस्कारसहित जित हासिल गर्ने तेरिया अहिलेसम्मकै भाग्यमानी र पहिलो भएकी छिन् ।
आयोगको शिलबन्दी पत्र गृहमन्त्रीको खल्तीमा !
Posted by abc staff.4years,4months ago
निर्णयबारे सबैजना अन्योलमा /
काठमाडौं । ७ एआईजीको बढुवा सिफारिस अबैध भएको भन्दै पुनराबलोकन माग गरेर लोकसेवा आयोगमा परेको उजुरीमाथि छानविन समितिले बुझाएको निर्णय पनि गोप्य राखेपछि फेरि हलचल भएको छ । बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको निर्णयलाई आयोगले बदर गरेको चर्चा चलिरहेको बेला उक्त खामबन्दी पत्र भने गृह तथा उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमको खल्तीमा पुगेर अड्केको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले छानविन गरि पुनरावलोकन गरेको बदर शिलबन्दी पत्र गृहसचिव र आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले खोल्ने आँटै नगरी गृहमन्त्री गौतमलाई बुझाएका कारण बास्तविकता के हो ? अझै बाहिर आउन सकेको छैन् । अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वास्थ्य उपचारका लागि अमेरिका रहेका कारण बढुवा प्रक्रिया दुई हप्ता अझै लम्बिने निश्चित छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्द लाग्ने पत्रकार यसरी भए पुर्न:बहाली
कास्की । सामुदायिक रेडियो सराङ्कोट पोखराका समाचार प्रमुख कमल पौडेल अथक रेडियोको ६ महिने अवैध निलम्बनबाट मुक्त भएका छन् । पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा भएका भ्रष्टाचारजन्य समाचार लेखन र बाचन गरेबापत रेडियो ब्यवस्थापन समितिले पौडेललाई ६ महिनाको लागि निलम्बन गरेको थियो । श्रमजीवी ऐन २०५१ विपरित रातारात उनलाई निलम्बन गरिएपछि पोखराको सञ्चार जगतमा छुट्टै तरङ्ग पैदा भएको थियो । निडर र जुझारु युवा पत्रकार पौडेलको निलम्बनप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की र अन्य पत्रकारिता सँघ सम्वन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरुले विशेष पहल गरेपछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको हो । त्यसपछि तत्कालै बसेको रेडियो सञ्चालक समितिको बैठकले पौडेललाई सोही पद र स्थानमा पुर्न:बहाली गरेको हो ।